Shaqooyinka Dubai ee Ajaanibta - Soo gal CV oo ku dar WhatsApp!
Dubai loogu talagalay carruurta - Ku noolaanshaha iyo waalidnimada Dubai
Shaqooyinka Dubai ee ajaaniibta aduunka oo idil. Jooji raadinta shaqo. Oo fursado nagu filan oo aan la galno shirkadeena. Kooxdayada khubaro xirfad leh. Ka caawinta helitaanka nolol cusub oo ku yaala Emirates. Gaar ahaan shaqaale cusub oo dibadda ah. Sababtoo ah Xirfadda Dubai. Ku noqo xaqiiqda dhabta ah ee ajnabiga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaanu ku qaadannay musharrax laga bilaabo aduunka oo idil. Kooxdayada sababtan awgeed waxay si cad u dhiirigelisaa ajaanibta. Si aad shaqo u hesho dunida oo dhan. Tan iyo markii aan bilownay inaan shaqeyno. Shaqaale cusub oo cusub ayaa soo gudbin kara CV shirkad shaqaaleed ee Emirates. Iyo in la tilmaamo, in badan oo ka mid ah shaqo ay ka helaan dalalka dibadda.
Guud ahaan marka laga hadlayo, Imaaraadka Carabta. Ma halka ugu weyn ee loogu talagalay ajaanibta. Sababtoo ah waddankan carbeed wuxuu ku yaal yahay Gacanka Ciraaq. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, ayaa meeshani u wanaagsan tahay Hindida iyo Madaxda Pakistan. Dhinaca wanaagsan ee Dubai City iyo Abu Dhabi. Noqo mid weyn xarunta ganacsiga ee UAE. Sababtoo ah waxay saami la wadaagtaa Cumaan iyo Saudi Arabia. Iyo inta badan caddaymaha qasbaya ee sheegaya inay ganacsi fiican sameeyaan. Gaar ahaan xaafadaha. Waxaa intaa dheer, luuqadda rasmiga ah waa Carabi. Oo waa wanaagsan in laga bilaabo UAE. Si fudud sababtoo ah tallaabada xigta waxay noqon kartaa a Qadar iyo Sacuudi Carabiya.
Laakiin dhanka dhinaca xun, waxaa jira waxyaabo yaryar oo loo baahan yahay in la raaco. Ka hor inta qof cusubi ku degi doono Emirates. Guud ahaan kooxdayada shaqaaleynta maamulka. Qoro hage-yaal iyo kheyraadyo badan. Gaar ahaan maamulayaasha cusub. Si looga caawiyo inay bilaabaan shaqo raadinta magaalada Dubai. Sababtoo ah helitaanka fursado ajnabi ah. Waxay si adag u qabataa khaasatan Isutagga Imaaraadka Carabta.
Wixii xirfad weyn u adeegso bogagga shabakadda shaqo raadinta
Guud ahaan, Isticmaal bogagga shabakada shaqo raadinta ee UAE. Kooxdayadu waxay horey u soo bandhigeen dhawr hagayaal oo wanaagsan. Gaar ahaan cusub dibad baxyada dibadda. Laakiin, kooxdeena waxay xusayaan dhowr meelood oo ka hooseeya mar kale. Dhinaca taban, a Qofka caadiga ah wax badan kama fili karo. Dib-u-celinta ugu badan waxay ku dhowdahay 2.0% illaa 3.0% iyo hubinta jawaabta aad u yar. Iyo kiisaska badankood dadka wuu kugu soo jawaabi doonaa. Laga yaabee inuusan aheyn qofka aad ka fileysid. Ama shaqo helid ayaa laga yaabaa inay kaa hoos timaado waxaad ka filan karto. La soco kaasoo aad u dirtay warqadda codsigaaga iyo CV. Sababtoo ah waxaa jira shirkado badan oo nacas ah oo dunida oo idil.
Si kastaba ha noqotee, Shirkadda Dubai City waxay kugu dhiirigelineysaa inaad isku daydo. Diiwaangeliso Faahfaahinta goobaha shaqada iyo xariirka shaqaalaha. Guud ahaan marka la hadlayo, sii kuwa u qoran kuwa iskudayo hal isku day. Sababta oo ah weligaa ma ogid waxaad soo kici doontid. Iyo halka waxaad ku dhici kartaa Bariga Dhexe. Sababtoo ah gaar ahaan magaalada Dubai. Xidhiidhada hal-abuurka ah ee fudud waxay samayn karaan shaqo fudud oo fudud. Waxaadna noqon kartaa dal cusub. Sababtoo ah mashiinnada raadinta guud ee shaqada. Wanaagsan tahay shaqo cusub iyo Shaqooyin ku yaal Dubai oo loogu talagalay ajnabiga weli way furan yihiin. Hase yeeshee, shaqooyinka lagu daro waxay kordhin karaan aragti cusub.
Sidee loo helaa shaqo sida mashiinka foreginer?
Ka ogow wax badan oo ku saabsan goobaha shaqada ee UAE
Ku saabsan Gacanka Talent: Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Gacanka. Guud ahaan, waxay la wareegeen shaqooyin badan oo wanaagsan. Maalin kasta waa la cusbooneysiiyaa shaqooyinka banaan ee wadamada Khaliijka. Iyo shaqooyin xirfad leh oo laga helo Qatar iyo sidoo kale Abu Dhabi. Dad aad u tiro badan ayaa Shaqooyin ka helay Dubai loogu talagalay ajaanibta boggaan.
Ku saabsan Bayt: Shirkadda XINGXXX ee Bariga Dhexe. Si aad ah loo qiimeeyo ajaanibta. Iyo mid ka mid ah bogagga internetka ee shaqada ugu sarreeya. Dadka oo dhan Bariga Dhexe iyo Hindiya iyo sidoo kale Caalamiga. U dirista CV garsoorayaasha.
Ku saabsan Edarabiya Shirkadani waa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan. Shirkada ugu muhiimsan waa in lagu baro dadka iyo ajnebiga. Shirkadan ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee Google. Dhab ahaan, shaqooyinka qaarkood ayaa bixiya. Dhinaca kale, shirkadu waxay bixisaa tilmaamo fiican oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah.
Ku saabsan Dubizle waa bogga ugu sarreeya ee bogga. Gaar ahaan magaalada Dubai. Dhinaca kale, jlaba qof oo doonaya iyaga oo isticmaalaya qaybta UAE iyaga oo raadinaya shaqo oo leh fiiso. Hawlgalku wuxuu bilaabmayaa 2005. Tan iyo markaas dubizzle.com ayaa noqday mid aad u caan ah. Iyo tirada dadka shaqooyin cusub ayaa la dhajiyay. Tani guud ahaan waxay ku hadashaa barxad adag. Wixii hubaal ah ee shaqo raadiyaha iyo loo shaqeeyaha.
About Monster Gulf: Websaydhka daayeerka xirfadaha. Waad raadin kartaa shaqo. Sababtoo ah shirkaddu muddo dheer ayey jirtay. Oo tan iyo markaas daanyeer isagoo darajo sare leh. Iyo wax badan oo qurux badan dadka iska diiwaangelinaya.
Ku saabsan Wareeg: shirkadda, xaqiiqda dhabta ah, waxay bilaabeysaa fursadaha. Gaar ahaan Dubai iyo Abu Dhabi. Tan iyo markaas, shirkadaha waxay heli karaan dib u eegis. Iyo weliba wareysiyada. Intaa waxaa dheer, shaqaaleeyaha waxay codsan karaan shaqo waxbarasho oo leh MBA.
Ku saabsan mihnada Xirfadaha Careerjet waa makiinad raadin xirfadeed oo sare. Dadka intooda badani waxay awoodaan inay isticmaalaan UAE. Wax kasta oo ay tahay waayo aragnimadooda. Dhinaca kale, habka loo qorsheeyey wuxuu ka dhigayaa nidaamka helitaanka shaqo aad u fudud. Internetku wuxuu u fududaanayaa isticmaalaha. Marka bogga jet-ka ee shaqadu bilaabmayo.
Ku saabsan Xirfadaha Dubai Xarunta Shaqada Dubai waa goob shaqo. Waxaa intaa dheer waa a habka cusub ee shaqo raadiyaha. Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa lagu soosaaraa Dhismaha Dawladda ee Dubai Dubai. Marka, waxay leeyihiin kalsooni sare. Dhanka kale, Xariirkaan ayaa dhab ahaan u dhaqaaqi doona wadada UAE.
Ku saabsan Reed: Tani waa mid ka mid ah makiinadaha shaqo raadinta ee UK ugu weyn. Dhinaca kale, wuxuu leeyahay warqad shaqo ee UAE. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dadka UK iyo Shaqaale caalami ah oo caalami ah. Waxaad codsan kartaa fursado shaqo oo cusub. Sidoo kale, waxay soo dirayaan bandhigyada shaqo ee GBP. Sidaas darteed waa runtii u qalantaa si loo eego.
Ku saabsan Indeed waxay ganacsi yihiin goobta shaqada ee No.1. Oo wuxuu ku jiray kaalinta 3 ee adduunka. Guud ahaan, shirkadu waxay sii korodheysaa. Iyadoo ay ka badan tahay 200 million booqdayaasha gaarka ah ee 2018. Iyo inaad saxiixdo heshiis cusub bil kasta.
Ku saabsan Naukri, Shirkadda Dubai City ayaa ku soo bandhigtay boggan. Sababtoo ah Naukri waxeey qortaa adduunka oo idil. Tusaale ahaan, gudaha India, UAE, iyo Qadar Goobtaani waa xayiraad buuxda ee shaqooyinka shaqooyinka dibedda ah. Iyo sidoo kale soo bandhigyo cusub oo ku saabsan suuqyada maxalliga ah.
Ku saabsan Laamo: Meeshaas shaqo maahan sidaas Caan ka ah xirfad shaqo ee UAE. Sababtoo ah shabakadaan internetka ka soo ururisay shaqooyinka furitaanka. si toos ah iyo sidoo kale waxaa loo diraa Qadar iyo Sacuudi Carabiya.
Shaqooyinka Dubai Oo loogu tala galay Ajnabiya waa u qalantaa?
Wax badan ayaa jira fursadaha shaqo ee UAE. Laga bilaabo barashada Ingiriisiga ilaa shaqada gacanta. Laga bilaabo booska hoose waxay noqon kartaa ikhtiyaar. Kaliya haddii aad tahay qof kuhadlaya afka carabiga. Guud ahaan hadaanad waayo aragnimo kugu filan lahayn. la’aan luqadda Carabiga ee Dubai. Fursad yar ayaa jirta xagga shaqada. Dhamaan goobaha ugu sareeya. Xaqiiqdi waa diyaar shaqooyinka Dubai ee ajaanibta. Waxaa intaa dheer, dhammaantood way isku mid yihiin.
Dhinaca xun, dhammaantood waxay leeyihiin a qadarka weyn ee fursadaha shaqada cusub. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, dad badan ayaa dib u dhigaya dib u bilaabeyn. Shaqo-dooneyaasha cusubi way maamuli karaan codsigooda maalin kasta. Dhab ahaantii iyada oo loo marayo mid kasta oo ka mid ah goobaha shaqada. Dhinaca togan, Dubai waxay koraysaa dhowr iyo toban sano. Afka Ingiriisiguna wuxuu noqonayaa kan ugu weyn Imaaraadku. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, fursadaha shaqada ee Imaaraadka Carabta. Sidookale, bilaw koritaanka caalamiga ah. Kadib, shaqooyinka Dubai ee ajaanibta si muuqata ayaa loo furay. Dhab ahaantii shaqaale cusub oo dibedda ah. Waxaan filan karaa inaan helo shaqooyin wanaagsan. Iyo dalal kala duwan oo ku xeeran agagaaraha Gacanka. Waxay noqon kartaa guri cusub ajnabiga.
Dubai waa sharciyo ajnabiya way fiican yihiin?
Imaaraadku waa meelaha ugu wanaagsan dhulka. Dhanka kale, nidaam sharciyeed wuxuu ku saleysan yahay heshiisyo adag. Tusaale ahaan, tarjumaad khadka tooska ah ee shareecada Islaamka. Wax kastoo dhacayana, waa in la raacaa. Mid ka mid ah Tusaalayaasha waa shaqaalaha caalamiga ah. Waxay inta badan ku nool yihiin Abu Dhabi ama Dubai shaqo. Laga bilaabo noloshooda sida shisheeye. Ha raacin xeerarka. Sidaa darteed, xaalad gooni ah, dhul xabsi ah oo loogu talagalay dembiyada. Tani waa sababta ay UAE isku dayayso in ay wax u baraan reer galbeedka. Waxa la qabanayo iyo Ha sameynin UAE. Taasi runtii way caawinaysaa iyaga iyo ma u yeeli lahaa xitaa hal dambi.
Dhinaca xun, waxaa jiray tusaalooyin dhowaan ah Magaalada Dubai. Dalxiiskan ajnabiga ah ayaa jebiyay sharciga. Isku day in aad la socoto qareenada. Nasiib darro, UAE sharciga wuu adagyahay qof walba. Had iyo jeer ku dar gacmaha gacmaha dadweynaha. Waxaa intaa dheer, ku dhajinta amaanta Facebook-ga sadaqada. Waxaa sii dheer cabitaanka aalkolada rukhsad la'aan ayaa si adag looga mamnuucay dadweynaha. Xayeysiiso qaar ka mid ah wararka xun xun, tusaale ahaan, inaad qol hoteel la wadaagto qof jinsi ama naag ka soo horjeedda (qof aan ahayn lammaanahaaga).
Intaa waxaa sii dheer, mas'uuliyiinta Dubai si aan caddaalad ahayn mararka qaar. The dawlada Imaaraatka carabta. Had iyo jeer u fiirso siyaabaha dhowrka ah ee wax looga weydiiyo. Weligaa looma oggola in la jebiyo sharciga Sharjah markay tahay dhaqanka xun ee ajnabiga. Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaa jira wax yar oo ka reeban dadka caalamiga ah. Tusaale ahaan, Dubai iyo Abu Dhabi hotel Ha waydiisan lamaanayaasha ruqsadaha guurka.
Kaas oo caadi ah loogu talagalay dadka deggan magaalada Dubai. Intaa waxaa sii dheer, UAE waxay leedahay nolol habeysan oo habeysan oo qof walbaa leeyahay. Taasi waxay noqon kartaa wax la yaab leh laakiin baararka qaniisyada badan iyo meelaha lagu caweeyo habeenkii Bariga Yurub dhillooyinka ayaa si cad u hela macaamiisha cusub. Ma tahay caadi oo loo furay caalamiyiin ku baahsan UAE.
Shaqooyinka Bariga Dhexe
Isha ku hay dalal kala duwan inay ka shaqeeyaan. Meelo badan oo xulasho ah ayaa ka jira aagga Khaliijka!
Qadar, Sacuudi Carabiya, UAE, Jordan
Qadar iyo Dhibaatooyin
Sida loo bilaabo sida mid ka mid ah ajnabiga ee Qatar?
Qatar, waxaa jira habab badan oo shaqo lagu helo. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay shaqaalaha ajnabiga ah waxay mas'uul ka yihiin mashruuca dhismaha magaalo cusub oo ku taal Qadar. Oo ay ku talajirto inay wax badan shaqaalaysiiso kharash badan oo ku baxa Qatar. Dhanka kale, koobka adduunka ee ciyaaraha 2020 ayaa laga faa'ideysanayaa oo la kulma xad-gudubyo deg-deg ah oo xaga xuquuqul insaanka ah hayeeshee yabooha dibuhabaynta dawlada. Dhanka kale, waxaa jira dhowr waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan u guurin Qatar.
Haddii aad u shaqeyn doontid shirkad sharci ah oo sharci ah. Warbixinta dhowr shirkadood ayaa duubay shirkad injineerinka magaceeda la yiraahdo “Mercury” MENA, kaas oo uga tegey shaqaale 80 shaqaale ah oo ka yimid Nepal, Hindiya, iyo Filibiinku waxay ku degeen oo aan mushaar qaadan muddo bilooyin ah Qatar. Marka, waa inaad had iyo jeer doorataa shirkad wanaagsan inay uga shaqeeyaan Bariga Dhexe.
Laakiin Dowladdu si kastaba ha ahaatee waxay ku eedaysay shirkadaha. Sababtoo ah waxaa la ogaaday inay adeegsadeen qaab dhismeedka Kafala ee matalaya barnaamijka kafaala qaadka Qatar. Taasina waxay ka dhigeysaa shaqaalaha inay ku dhegaan hal loo-shaqeeye si nidaamsan si looga faa'iidaysto tiro badan oo shaqaale shisheeye ah. Nepal, dadka 34 waxay u sheegeen Amnesty in Mercury MENA ay ku lahayd celcelis ahaan culeyska '1,500 rodol', iyo nidaamka Kafala loo adeegsaday in looga faa'iideysto. Marka, markasta isku day inaad lahadasho kooxdeena ama ugu yaraan iska ilaali shirkadaha xun.
Sidee loo codsadaa shaqada Qadar?
Qatar ugu fiican Goobaha shaqada ayaa ah kuwo laxiriira Dowlada. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Wasaaraddu waxay leedahay goob shaqo. Waxay ka mid yihiin meelaha ugu wanaagsan ee lagu yaqaan macluumaadka fiisaha xarun-dhexe. Iyo waxaad dooran kartaa nooca Visa waxaad raadineysaa inaad hesho. Tusaale ahaan, waad dalban kartaa fiisada ardayda, fiisada booqdaha, fiisada shaqada. Guud ahaan hadalka, waxaa jira dhib maleh helida macluumaadka noocaan ah Google. Isha ugufiican ee taasi waa safaarad gudaha ah. Dhanka kale, waad aadi kartaa qunsuliyada wadankaaga hooyo. Waxay haystaan ​​ku dhawaad ​​dhammaan fiisooyinka Qatar. Marka, hadda waa waqtigii la sharxi lahaa Goobaha ay heli karaan dadka shaqo doonka ahs Qadar waxay ku yaalliin hoos.
Helitaanka shaqooyinka Qatar iyadoo ah ajnebi ma aha wax fudud inkasta oo la is barbar dhigo mid kale oo dhexaad ah - wadamada bari laakiin waa macquul. Dukumiintiyada loo baahan yahay oo laga yaabo inay dalbadaan dalabka shaqada waa kuwo aad u weyn. Laakiin mushaarkoodu waa ku dhawaad mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Bariga Dhexe.
Sacuudi Carabiya iyo Fikrado
Sida loo bilaabo mid ka mid ah shaqaalaha ajnabiga ah ee Sacuudi Carabiya?
Waa hagaag Saudi Arabia, shaqaalaha ajnabiga ah waxaa lagu qiyaasey inay ahaayeen 15million sida at 2019. The Ganacsiga saliida iyo fursad cusub oo la helay waddankaas oo leh awood aad u weyn. Waana tan sababta loo dhiiri galiyay hijrada dabayaaqadii 1930s. Waqtiga xaadirka ah, waxay leeyihiin ikhtiyaar ballaaran oo loogu talagalay horumarinta Sacuudi Carabiya. Marka, waxay shaqaaleysiinayaan shaqaale ajnabi ah. In kasta oo qaar loo qorey qaybo kale sida beeraha, warshadaha adeegga guryaha iyo nadaafadda. Sidii ay Carabtu u dhaqangelin lahaayeen jacaylka inaad haysato wax kasta oo jira oo diyaar u ah inay aadaan meel walba.
Sida dalka Muslimka ah ee caadiga ah. Jinsiyadda ajnabiga waxay go'aamisaa jaranjarada shaqaalaha ajnabiga ah. Waana laga yaabi karaa, tusaale ahaan, shaqaale ka socda Hindiya iyo waddamada reer galbeedka kuwaas oo loo raray Sacuudiga. Waxay sida caadiga ah qabtaan jagooyinka ugu sareeya oo xitaa aysan qaban maamulayaasha Saudis. Jagooyinka hoosena waxaa leh Afrikan iyo Koonfur Aasiya.
Dalka Sacuudi Carabiya wuxuu ahaan jiray midka ugu liita uguna badan waddamada aan horumarin ee adduunka waqti dheer kahor. Laakiin ka hor helitaanka saliida shirkadda Texaco Oil (shirkad Mareykan ah). Ma ahan waqti dheer kadib helitaankii. Gargaarka shisheeye iyo khibrad Waxaa loo baahnaa si looga faa'iideysto kaydka saliida ee ballaaran ee la helay.
Waxaa sare u kacay tirada shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala Sacuudiga. Iyo natiijada ka dhalatay sahaminta ayaa laga helay wadamada kale ee Bariga Dhexe. Mashaariicda horumarineed iyo qorshayaasha kaabayaasha ayaa dhiirrigeliyay ku soo qulqulaya kuwa xirfad leh iyo sidoo kale shaqaale aan xirfad lahayn. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shaqaalaha badankood waxay ahaayeen reer Falastiin. Kadibna waxay bilaabayaan qaadashada Masriyiinta, Yamaanida iyo kuwa kale ka yimid wadamada carabta.
Sidaa darteed, ma jiraan wax shaqo ah aniga oo jooga Sucuudiga?
Sacuudi Carabiya waxaa lagu yaqaanaa inay tahay dalka ugu taajirsan Carabta ilaa 2023. Taasi waa hubaal in macluumaad wanaagsan loogu talagalay masaafada. Waxay leeyihiin shirkado badan oo ku yaal Bariga Dhexe. Shirkadeena had iyo jeer waa goob shaqo oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee ajnabiga ah ee ku sugan Sacuudiga. Dhinaca taban, gudaha Sacuudiga, hababka fiisada sidoo kale ma fududa in la helo. Waxaan dhihi lahaa mid ka mid ah kuwa ugu adag uguna murugsan adduunka. Gaar ahaan ajaanibta ka yimi Yurub ama United States.
Kooxda suuqgeynta ee dawladda Sucuudigu si firfircoon ugama suuq geyso dalxiiska. Maaha nooca dadka lagu soo dhaweynayo Dubai. Marka, waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn in la helo fiisaha dalxiiska wax ka yar toddobaadyo 2. Waxaa jira u janjeera diidmada gelitaanka Sacuudiga. Gaar ahaan dadka haysta shaabad Israel. Markaa hadaad ka timid wadankan oo leh baasaboor la cusbooneysiiyay. Waxkastoo aad sameyso, waxay u baahdeen dukumentiyo si kastaba. Laakiin taasi waxay u egtahay in lagaa doonayo dalabkaaga shaqo. Xaaladaha badankood si kastaba ha noqotee.
Mid ka mid ah talooyinka ugu caqliga roon ee loogu shaqeeyo halkaas. Waa inaad haysato dukumiintiyo sida shahaadada ugu sarreeya ee dugsiga. Gaar ahaan caawimaad ayey noqon doontaa haddii aad adigu gudaha geliso mid ka mid ah wadamada muslimiinta. Tusaale ahaan kulleej ama jaamacad, shahaadada astaamaha iyo shahaadooyinka kale ee la xiriira. Laga soo bilaabo Jaamacad ku taal Qatar ama Imaaraadka Carabta. Laakiin dhinaca togan, waxa keliya ee kugu soo dhacayaa shaqo waa CV-gaaga. Marka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato halka aad ku dhufanayso dalabkaaga. Tusaale ahaan, hadaad ku sameysid suuqgeynta habka saxda ah. Shaqaaleeyayaashu waxay kugula talinayaan inay kula shaqeeyaan. Waqti iyo dadaal ayaad ku bixin doontaa inaad CV-gaaga kaamil noqoto. Marabtaa inaad lumiso meel kasta.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta iyo Fikradaha
Sida loo bilaabi karo mid ka mid ah ajnabiga UAE?
Well, in UAE (United Arab Emirates), Dowladda UAE waxaa loogu talagalay soo-galootiga. Dalkanina wuxuu ku faraxsan yahay inuu shaqaale cusub ka soo qaato dalka dibadiisa. Intaa waxaa dheer, shisheeye ka yimid adduunka oo idil. Ma Waxaan raadinayaa inaan halkaas u guuro iyadoo weli aan canshuur laga qaadin. Intaa waxaa dheer, shaqooyinka laxiriira dowladda ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu fiican. Sababtoo ah muwaadiniinta UAE waxay aaminsan yihiin in ceeb ku jirto la shaqaynta qaar ka mid ah shaqooyinka waaxaha gaarka loo leeyahay. Intooda badan Carabtu maxalliga ahi waxay la shaqeeyaan qandaraaska dawladda iyo mashaariicda ama ka shaqeeyaan Milatariga. Nidaamka fiisooyinka shaqada ee waddanka iyo dukumiintiga sharciga ah ayaa aad u fudud. Waxaa intaa dheer, bulshada, marka la barbar dhigo wadamada deriska ah. Tusaale ahaan Sacuudiga iyo Qadar waa aad ayey ugafiican tahay howsha dib u dejinta.
UAE waxay leedahay soo jiidasho badan oo xitaa qiyaasi kara. Iyada oo taas maskaxda lagu hayo, shisheeyaha caalamiga ah ee halkaas ka guuraya. Mid ka mid ah dadka shaqo doonka ah ee aan ku jirno waa dadka ka soo jeeda waddamada reer galbeedka. Guud ahaan marka laga hadlayo, Emiratis waa ku yar yihiin tirada dadka waddankooda ku nool. Tusaale ahaan, celcelis ahaan sagaal illaa mid. Waxaa intaa dheer, dawladda UAE ayaa dejisay sharciga. Taasina waxay cadeyneysaa in soogalootiga uu xaq u leeyahay inuu codsado dhalashada UAE ka dib markii uu dalka joogo ugu yaraan muddo 30 sano ah. Marka, run ahaantii, waa inaad halkaas joogtay waqti dheer. Hortaada xitaa hel fursad aad ku noqoto muwaadin UAE.
Maxaan ubaahanahay inaan shaqo ka helo UAE?
Waxa ugu dambeeya waa dukumiintiyada UAE ee shaqa raadinta. Tusaale ahaan, shahaadada ugu saraysa ee UAE ee dugsiga. Doono xaqiiqdii waxay kaa caawineysaa inaad kor u qaaddo caqabad fursad cusub. Hadana hadaad leedahay kuliyad caalami ah ama jaamacad. Waa hubaal kaa caawin doona dhismaha xirfadaha UAE. Dhanka kale, shahaadada astaamaha iyo shahaadooyinka kale ee laxiriira ilo ixtiraam leh sida US ama UK waa mid ka faa'iidayso adduunka carabiga. Laakiin dhab ahaan, waxa kaliya ee shaqo ku heli doona waa Resume-kaaga. Waxay ku sameyneysaa suuqgeyntaada khibradaada, sidaas darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad ka shaqeyso sidii CV-giina kaamil yahay. Had iyo jeer hubso inaysan khaladaad jirin. Waa in lagu xasuustaa taas Dalka Isutagga Imaaraadka Carabta waad isticmaali kartaa Ingiriis CV.
Wadamada Jordan iyo Expats
Sida loo bilaabo sida mid ka mid ah shisheeyaha ku yaal Jordan?
Meel kale oo Bariga Dhexe ah waa Jordan. Sababta oo ah waddankan ayaa jabaya diiwaannada. Iyagu waa dad wanaagsan oo waxay leeyihiin guri ay ku nool yihiin in kabadan 2 milyan oo qaxooti reer Falastiin ah sida 2015. Marka, ma aha oo kaliya inay shaqaaleysiinayaan laakiin sidoo kale taageeraan kuwa kale. Qiyaastii boqolkiiba 98% dadka reer Jordan waa Carab. Intaa waxaa dheer, haray 2% waa qowmiyadaha tirada yar. Ururka Shaqaalaha Caalamiga ee Jordan. Waxaa lagu sheegay TV iyo News in xaaladda shaqada ee Urdun ay adag tahay. Sababta oo ah Joogitaanka shaqaale aad u hooseeya oo ku shaqeeya tirintay. Tusaale ahaan, shaqaalaha ajaaniibta ah ee kujira warbixin cinwaan looga dhigay “Suuqa adag ee Ganacsigu Noqdo Caqabado Badan”. Marka, waa inaad u diyaar garowdaa iyo raadi shaqooyin waxtar badan oo tayo leh. Maareeyayaasha ama xitaa Maareeyayaasha Sare.
Natiijadii ka soo baxday daraasad ballaaran oo la sameeyay Sebtember 2016. Kuwaas oo hay'ad Dawladeed ay higsaneysay oo wax ka qabatay. Dad aad u tiro badan ayaa helay saameynta tabaruca ee tabaruca ah ee Jordan ee martigelinta tirada badan ee qaxootiga. Intaa waxaa sii dheer, suuqgeeda shaqada ee qaranka, waxay caddeeyeen in dadkiisu shaqaynayaan. Warbixinta laxiriirta Dowlada ayaa damacsan ka jawaabida su'aalaha shaqaalaha shisheeye. On sida loo kordhiyo heerka shaqaalaynta ee Jordan ee suuqa qaran.
Haddaba miyuu webiga Urdun ku jiraa shuqulkiisa?
Dhanka kale, waxay isku dayaan inay ogaadaan sida loo hubiyo in jawiga shaqadu ku habboon yahay dhammaan shaqaalaha. Kaliya maahan mid ka yimid dibadda laakiin dhammaan noocyada kharashyada iyo shaqaalaha gudaha sidoo kale. Iyo sidoo kale, sida loogu lug yeesho qaxootiga Siiriya iyadoo aan laga saarin shaqaalaha Jordan. Oo taasi waxay ahayd su’aasha weyn ee ay weydiiyeen xubnaha reer Yurub. Furitaanka suuqa shaqada qaxootiga ayaa ahayd qorshe lagu hubinayo in fiiro gaar ah la siiyo sida ugu yar ee loo adeegsan karo heerarka shaqada ee shaqaalaha ajnabiga ahs, iyadoon loo eegayn xaaladdooda. Si aad u hesho rukhsad shaqo oo ku taal Jordan, ka shaqaynta tan loo-shaqeeyahaagu marka hore waa loo baahan yahay codsi shaqo Jordan waa wax fudud in laga galo websaydhyada dowladda.
Dalka Kuwait iyo Dhibaatooyinka
Sida loo bilaabo mid ka mid ah shaqaalaha ajnabiga ee Kuwait?
Kuweyt, waxaa ka jira isbadal weyn sanadihii lasoo dhaafay. Tusaalooyinka mid ka mid ah waa nidaamka kafaala qaadka shaqaalaha shisheeye. Noqo mid sharciyeysan oo natiijooyinka ka soo baxa, shisheeyaha waa in ay maal geliyaan loo-shaqeeye maxalli ah si loo helo rukhsad shaqo. Marka, waxaa jira caqli badan oo intaas oo dhan ah dad badani waxay isku dayaan inay noqdaan kuwa doonaya shaqo raadins. Waxaa jiray isbaddal weyn bishii Agoosto 2008, Xildhibaan Abdullah Al-Roumi wuxuu sheegay inuu u diyaar garoobayo sharci lagu baabi'inayo nidaamka kafaala qaadashada shaqaalaha kafeel ee Kuwait. Marka, waxay ku maareeyaan taas habka saxda ah. Waxaa intaa dheer, Isbedelkaasi wuxuu ahaa inuu caawiyo qurbaha. Dawladdu waxay qorsheynaysay inay baajiso nidaamka kafaala qaadashada si loo abuuro nidaam cusub. Waxay hiigsanayeen inay sax ahayd maxaa yeelay taas oo u oggolaanaysa ajaanibta inay wareejiyaan ogolaanshiyaha joogitaankooda. Wixii markaas ka dambeeyayna, Wasaaradda Arimaha Bulshada iyo Shaqada ayaa kiiskooda qaadata.
Dhinaca taban, ajnabi ahaan tusaale ahaan Switzerland. Waxaad ka heli kartaa shaqo Kuweyt. Shaqadaas oo hubaal ah si fiican ayaa loo bixin doonaa oo muddo dheer. Markaa, shaqo hore u jirtay Kuwait waxay u horseedaysaa dhaqdhaqaaq caqli gal ah. Laakiin intaadan shaqo bilaabin, waxaad u baahan tahay fiiso shaqo sida Dal kasta oo Carabi ah. Ogolaanshaha shaqada iyo fiisada shaqada ayaa ah waxyaabo kala duwan gabi ahaanba, si aad u hesho ruqsad shaqo, waa inaad inbadan la soo shaqaysay loo shaqeeyahaaga, ka dib markii aad heshay rukhsad shaqo, baahi ayaa jirta si aad u hesho fiisaha gelitaanka shaqada safaarad kasta oo kuugu dhow.
Sidaas darteed, ma jiraan wax shaqo ah oo ku yaal Kuwait?
Dalka Kuweyt wuxuu leeyahay mid ka mid ah bogagga internetka ee gaarka loo leeyahay. Hagaag, ogow macluumaadka fiisada ee xarun dhexe ah. Taasi waa sidoo kale iyada oo aan loo eegin nooca Visa ee ay shisheeyuhu filan karaan. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa fiiso arday ama fiiso soo-booqde, iyo intaas, runtii maamuli kartid. Dhanka kale, fiisaha shaqada iwm. Dabcan, dhib malahan dhibaato ku helida macluumaadka noocaas ah Bing ama Google. Meelaha ugu fiican ee laga heli karo dadka shaqo doonka ah ee Kuweyt waxaa lagu qoraa khadka tooska ah. Waad ka heli kartaa iyaga oo garaacaya Shaqooyinka Kuwait ee ajnabiga ama shaqooyinka ee Kuwait.
Kuwayt ahaan dalku wuxuu leeyahay jagooyinka banaan ee ugu wanaagsan waaxaha Maaliyadda. Marka, si aad u hesho shaqo ajnabi, waa inaad ku dhufataa shaqooyinka maaliyadeed marka hore. Dhanka kale, goorma Waxaan isbarbar dhigey wadamada kale ee bariga - dhexe Taasi ma fududa in la helo laakiin waa suurtagal. Kuwa Kuwait waxay u baahdeen dukumentiyo u badan tahay in laga codsado codsiga shaqada safaaradda Kuwait.
Gabagabada Dubai oo ah shaqaale ajnabi ah
Shaqooyinka Dubai For Ajnabiyeyaashu way fiicanyihiin inay ka tagaan adduunka oo idil. Iyo tan maskaxda, dad badan. Gaar ahaan maamulayaasha, hubaal helitaanka fursad fiican ee shaqo. Kaliya macaamilka dhibic waa qaab nololeed ee Dubai ama Abu Dhabi. Soo booqdayaasha cusub ee Emirates. Waa inaad u hoggaansata xeerar dhowr ah. Dhanka kale, Dubai waa maamulayaal ajaanib ah oo soo dhaweynaya. Mid ka mid ah tusaalayaasha waa Dubai Airports, hoteelada ama ganacsiga baabuurta. Dhammaan meelahaas oo ku yaal Dubai. Dad cusub ayaa laga heli karaa. Laga soo bilaabo shaqaalaha Pakistani ilaa madaxda sare ee India. Sidaa darteed, shirkadeenu waxay si xaqiiqo ah ugala talineysaa shaqaale ka socda adduunka oo dhan. Dhab ahaan, booqashada Dubai City iyo bilow shaqo oo dibadda ah.
Waddan kasta wuxuu ka dhigaa goobahaas inay diyaar noqdaan loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee ajnabiga ah waxay jecel yihiin inay shaqo ka helaan Bariga Dhexe. Markaa mar labaad waxaan ku xasuusineynaa goobahan shaqo.
Meelaha shaqada ugu sarreeya iyo portals
Gulf Talent wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo tayo fiican leh iyo shaqooyin xirfad leh
Shaqooyinka Dubai wuxuu leeyahay shaqo dhejin gaar ah meela ku yaal Dubai
Shaqooyinka Abu Dhabi wuxuu leeyahay shaqooyinka boosaska gaarka ah ee Abu Dhabi
Dubizzle waxaa loo calaamadiyey inay tahay goob weyn oo loogu talagalay Abu Dhabi
Glassdoor waxaa loo yaqaanaa inuu helo fursado ku yaal Abu Dhabi iyo Dubai
Bayt waa la tixgeliyaa inaad noqoto mid ka mid ah bogagga internetka ee shaqada ugu sarreysa ee raadinta Bariga Dhexe.
Monster Gulf waa astaan ​​shaqo raadis oo duug ah oo jirtay ilaa waagii casarkii.
Gulf Jobs Suuqa wuxuu u fiican yahay shaqooyinka heerka-fulinta.
Xirfadda Shaqada waa mid caan ah waxay leedahay fursado shaqo raadinta ee UAE.
Dhab ahaantii waa nooca shaqada Mareykanka ee UAE.
Baro 4 Good Waxay u muuqataa inay ku saabsan tahay shaqooyinka barista laakiin waxay shaqooyin ku leedahay waaxaha kale.
Laacoon waa goob lagu ogaado shaqo-joojin shaqo oo si toos ah uga soo jeeda shabakadaha shirkadda.
Barida Ingiriiska ee Bariga Dhexe
Hab kale oo caqli badan, oo fadlan ha ilaawin taasi waa barashada Ingiriisiga. Shirkaddayadu marwalbana way xasuusisaa, kuwa xiiseynaya inay wax bartaan, Ingiriisiga barana. Waa laga yaabaa xaqiiqdii dooro xariifka iyo kan ugu fudud. Dabcan, hadaad sifiican uguhadashid kuhadalka Ingriiska, ama wax qorista. Kooxdayada shaqaalaynta waxay kugula talineysaa shaqo doonka cusub inay ka dhex baaraan degel kasta fursadaha shaqo si wax looga baro UAE waxay isku dayi karaan goobo ay ka mid yihiin;
Wadarta ESL waa mid aad u mashquul badan oo xiiseeya dadka xiiseeya barashada dibada.
Cafiska ESL-ka waa mid ka mid ah furitaanka shaqada ugu wanaagsan adduunka oo dhan.
Imtixaanka waa goob isku-dubarideysa shaqooyinka waxbaridda weyn.
Qorista Afduubka ayaa la ogaaday inay tahay mid ka mid ah dadka wax qora barayaasha ESL ee ugu weyn ee la heli karo.
Kuwa xiiseynaya Shaqooyinka Maaliyadeed, waa kuwan qaar dibadeed iyo Wareegyada Shaqaalaha;
eFinancialCareers waa mid ka mid ah makiinadaha raadinta ugu jecel ee shaqooyinka maaliyadeed ee laga heli karo webka, inkastoo inkastoo aysan helin Qatar
Soco Abroad ayaa sidoo kale lagu ogaaday in uu leeyahay shaqo fiican
Shaqooyinka Oversea waa goob la heli karo muddo wakhti dambe ah, laakiin waxay u muuqataa inay noqoto mid isku dhafan oo u dhexeeya farriimaha boggaan iyo goobaha kale.
LinkedIn waa khayraad farsamo oo ballaaran oo loogu talagalay dhisida xiriirrada gudaha iyo sidoo kale meesha aad xiiseyneyso
Waxaa sidoo kale jira bogag kale sida;
The Guardian-ka waxaa loo yaqaanaa inuu noqdo mid ka mid ah bogagga dhamaystiran ee loogu talagalay dadka dalxiiska ee UAE
Telegraph waxay bixisaa talo maaliyadeed oo wanaagsan oo loogu talagalay diyaarinta
Bariga Dhexe, gaar ahaan UAE, Sacuudiga iyo Qadar. Had iyo jeer waxay u haysaa shaqooyin wanaagsan ajaaniibta ka shaqeysa meelo badan, oo ka badan meelaha kale ee ku yaal Bariga-Dhexe. Sifudud maxaa yeelay waxay raadinayaan inay horumariyaan mashaariic badan oo dheeri ah. Laakiin dhinaca taban, waxaa jira habraacyo qaar loogu baahan yahay shaqaalaha dibedda jooga. Tusaale ahaan, dukumentiyada ay suuragal tahay in lagu dalbado codsi shaqo kasta waa:
Kaarka Aqoonsiga Qaranka
Nuqulada kaarka aqoonsiga waalidiinta
Xaddiga baasaboorka ee 24 waa midab sawir leh
Liisanka Wadista (haddii aad haysato)
Macluumaadka Visa iyo waraaqaha
Koontada Bangiga ee wadankaaga
POI - Caddeynta Aqoonsiga (midka Dalbashada)
Sidoo kale shahaadooyinka asalka ah ee asalka ah (haddii aad haysato)
2 nuqulka sawirada baasaboorka
POA - Cadeynta cinwaanka
Nuqul ka mid ah shahaadada waxbarashada dugsiga
Si adag loo sameeyey shahaadooyin jaamacadeed
Iyo waxyaabo kale oo ay codsan karaan
Marka, sida aad aragto, fursado ayaa kuu jira adiga. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad kaliya leedahay geesinimo kugu filan si aad nolol cusub uga bilowdo dalka dibaddiisa. Waxaa jira in kabadan 3 milyan oo muhaajiriin ah oo ka shaqeeya Bariga Dhexe. Sidoo kale waad ka mid noqon kartaa. Xaqiiqdiina, waxaad u baahan tahay qorshe wanaagsan oo ficil. Intaa waxaa sii dheer, wax walboo wadankaaga lagu habeeyay oo ay dibedda shaqo ka bilaabaan. Shirkaddayadu had iyo jeer waxay sugeysaa dalabkaaga. Marka, fadlan ka diiwaan geli CV-ga kooxdeena HR. Kuwa shaqada qorayaa waxay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan hubaal!